indiana trano filokana amin'ny slots akaiky ahy
patin ny roulette taille 43
patin ny roulette kilalao tantara
patin ny roulette tout terrain
MGM Resorts Iraisam-pirenena ny Valan-javaboary ny tantara an-Tsehatra any amin'ny casino anivon'ny (zorony atsimo-atsinanana) ny Monte Carlo Las Vegas Resort & Casino nankalaza ny fitokanana ny alin'ny sabotsy teo.
Misy miaraka MGM ny $100 tapitrisa Kianja fialam-boly distrika tamin'ny Las Vegas Strip, izay nanokatra ity taona tamin'ny 4 aprily ny velona fialam-boly toerana ny fotoan-dehibe zava-nitranga dia notokanana tamin'ny fampisehoana rock malaza vondrona Ny Pretenders sy malaza ilay mpihira sady mpamoron-kira Stevie Nicks, araka ny PRNewswire gazety. Rehefa vahiny dia raisina roa Ny Pretenders malala indrindra ny hira; "Indray ny Rojo-Jiolahy," ary "aho Mitsangana eo Ianao," Nicks, izay mialoha ny fandraisana ny dingana dia aseho miaraka amin'ny antokom-manan-danja ny tantara an-tsehatra, nandray ny namidy ho-avy vahoaka ny vaovao Park Teatra. Manomboka ny fomban-drazana ho an'ny ho avy mpanakanto misy, Nicks fampisehoana izay tafiditra tsy nampoizina duet amin'ny Pretenders' firaka mpihira sady mpikambana mpamorona ny sehatry Chrissie Hynde, nankalaza ny fampisehoana amin'ny alalan'ny autographing ny lanonana rindrina indiana miampita casino waupaca wisconsin. Ny fampisehoana nataon'ny roa no vatolampy sy ny horonam-boky sary masina nanao ny encore ny Nicks' mahazatra, "Tany," izay natokana ho Resorts' mpitantana Richard Sturm sy ny Volavolan-dalàna Hornbuckle ho fanitarana ny fanasana Nicks ho Park tantara an-Tsehatra voalohany headliner ary ny "anjara ny tantara," araka ny famotsorana azy indiana trano filokana amin'ny slots akaiky ahy. Ny Valan-javaboary ny tantara an-Tsehatra voalohany ho ny dingana voalohany ao amin'ny fanovàna ny Monte Carlo, izay hotontosaina nandritra ny roa taona manaraka ary ahitana ny trano fandraisam-bahiny roa miavaka niainany; ny fanombohana ny Valan-javaboary MGM, vaovao ny trano fandraisam-bahiny mihaja, ary Las Vegas dikan ' ny NoMad trano fandraisam-bahiny, Sydell Vondrona malaza New York, NY fananana patin ny roulette taille 43. Araka ny fanambarana an-gazety, miaraka amin'ny tanteraka redesigned vahiny efitra, isan ' ny trano fandraisam-bahiny vaovao, dia ny endri-javatra tsy manam-paharoa ny sakafo sy zava-pisotro ny fanatitra.
Ho avy ny fampisehoana amin'ny Kianjan'ny Teatra ahitana Bruno Mars, iza no handray an-tsehatra amin'ny Taona Vaovao ny faran'ny Herinandro (30-31 desambra), miaraka amin'ny nahafaty ny mpanakanto malaza izay noeritreretina mba hanatanteraka amin'ny 5,200-pitsarana ny tantara an-tsehatra amin'ny taona 2017 patin ny roulette kilalao tantara. MGM ny fialam-boly vaovao toerana ihany koa ny hampiantrano ny lalao ara-panatanjahantena anisan'izany ny ady totohondry sy ny MMA, ankoatra ny hafa patin ny roulette tout terrain. Ny fanokafana ny Kianjan'ny Teatra furthers MGM Resorts' paikady mba hanohy ny fivoaran'ny Las Vegas' ny fialam-boly tontolo amin'ny fanomezana ny olona rehetra ny amin'ny maso akaiky sy manokana ny hatsiaka nankalaza ny mpanao fanatanjahan-tena sy manao ny mpanakanto.
Ny dingana amin'ny teatra dia mahavariana 40 metatra ny haavony amin'ny 140 metatra ny sakany, feno 20 tongony midadasika kokoa noho ny sehatra tao amin'ny mpitsabo nify, izay Park tantara an-Tsehatra ny lohan ' ny mpifaninana..